बाग्मती सफाइ अभियान ८ र्औ वर्षमा प्रवेश, सबैलाई बधाई
सोम, जेठ ५, २०७७
बाग्मती नदी निरन्तर रुपमा सफाइ गरेको ७ वर्ष पूरा भई ८ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७० साल जेठ ५ बाट शुरु भएको यस अभियानले नदीको स्वरुप तथा ठोस फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको छ । यो ७ वर्षको अन्तरालमा लार्खौ अभियन्ताको सक्रिय सहभागिताले हजारौँ टन फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न सफल भएको अभियन्ताले बताएका छन् ।
अहिले बाग्मती नदीमा फोहोर फाल्नु हुन्न भन्ने सन्देश सर्वत्र प्रवाह भएको छ । यस महाअभियानमा सहभागी भई नदीलाई जीवितपार्न सहयोग गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सामाजिक अभियन्ता, निजी तथा सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिककर्मी, विद्यालय, संचारकर्मी, स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना तथा निस्वार्थ भावले सामाजिक काममा सक्रिय सबै नागरिक धन्यवादका पात्र रहेका छन् । बाग्मती नदीमा मिसिएको ढल व्यवस्थापन हेर्दा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको क्षेत्राधिकार र कानुन आधारलाई भने सहि रुपमा प्रयोग भएको देखिदैन ।
ईकोसमाचारले बाग्मती नदी सफाइ अभियानका विभिन्न गतिविधिलाई प्रचार प्रसार गर्दै नागरिक दायित्व निर्वाह गराउन सबै वर्गका मानिसलाई सचेत गराउदै आएको छ । यस अवसरमा हामीले प्रतिनिधि अभियन्ताका विचार तथा आगामी दिनमा महाअभियानको स्वरुप कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थियौँ
प्रस्तुत छ उहाँहरुको विचार ।
ओम बस्नेतः "बाग्मती सफाइ अभियान सामाजिक अभियान बन्न सफल ।"
अभियन्ता ओम बस्नेतका अनुसार हिजोका दिन सम्झदा यो अभियान यसरी सफल हुन्छ भननेमा धेरैले गरेको शंका हटेको छ । यो सामाजिक महाअभियानको रुपमा परिणत भएर प्रत्येक नागरिकलाई सफाइको महत्व बुझाउन सफल भएको छ । नदीको भएको परिवर्तन र अभियानले पाएको उचाईलाई आत्मसाथ गर्दै नदीलाई प्राकृतिक स्वरुपमै फर्काउन आवश्यक रहेको उहाँले दर्शाउनुभयो । अभियानमा संलग्न हुने सबै क्षेत्रका जिम्मेवार नागरिकलाई धन्यवाद दिदैँ अबको यात्रा सफाइ तथा तरल फोहोर व्यवस्थापनमा एक जुट भएर लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
डा राजु अधिकारीः "बाग्मती नदी क्रमिक रुपमा ब्युतिदैछिन् ।"
बाग्मती नदी सफाइको साझा अभियानले सरकार, नागरिक तथा सबै वर्गलाई जगाएको छ । आत वर्ष बित्नु आफैमा लामो समयावधी हो । अविरल अविराम यस अभियानमा समर्पित सबै मनहरुलाई हृदयदेखिनै नमन गर्न चाहन्छु । समय, समाज र संगतले धेरै कुरा सिकाउछ र सबैले अनिवार्य रुपमा सिक्नुपनि पर्दछ । हिजो भएका सुधारात्मक पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै सफा एवं स्व्च्छ बाग्मती नदी बनाउन प्रण गरौँ । हामीले देखेको नदीप्रतिको सपना छिट्टै पूरा हुन्छ ।
रञ्जिता श्रेष्ठः "सफाइ अभियान सर्वधर्म बनेको छ ।"
बाग्मती सफाइ अभियान सफलतातर्फ उन्मुख भईरहेको दृश्य हामी सबै अभियन्ताले देखिरहेका छौँ । यसको प्रेरणामा तथा स्व स्फूर्त रुपमा विभिन्न अभियान संचालन हुदै सफलता तर्फ उन्मुख भएका छन् । गोदावरी खोला सफाइ अभियानपनि आफैमा एउटा सफल उदाहरण बनेको छ । यो समयावधिभर अभियानमा सक्रिय हुनुभएका सम्पूर्ण अभियन्तालाई हृदयदेखिनै सम्मान गर्न चाहन्छु । नागरिकलाई प्राकृतिक सम्पदाको सफाइ तथा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोच विकास गर्न सफल भएको छ ।
किशोर सिंह शाहीः "सबैलाई धन्यवाद, फेरि उर्जाशिल भएर आउनुहोस् ।"
सामाजिक अभियानको उपलब्धी गणितिय नियमले मापन गर्ने विषय नभएको स्मरण गर्दै सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिले बाग्मती सफाइ अभियानको परिणामले म स्वंय उत्साहित भएको छु । आजको विशेष दिन विश्व महामारीमा रहेको कोरोनाले सफाइका स्वरुप परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छौँ । प्राकृतिक महत्व एवं धार्मिक आस्था बोकेको बाग्मती नदी सफाइ अभियानमा अबको प्राथमिकता तरल फोहोर व्यवस्थापज रहेकाले यसतर्फ सबैलाई सोच्न आग्रह गर्दछु । बाग्मती लगायतका यसका सहायक नदी सफाइ तथा देशभर चलेका सफाइ अभियानले नागरिक दायित्व बहन गर्ने समूह निर्माण भएको छ । यस अवसरमा सबैलाई धन्यवाद दिदै फेरि उर्जाशिल भएर आउन अनुरोध गर्दछु ।
प्रमिला पौडेल :"ठोस फोहोर टिप्ने, ढल बगिरहने कहिलेसम्म ?"
सबै नेपालीले बाग्मती सफाइ अभियानलाई प्रेरक अभियानका रुपमा लिएका छौँ । ठोस फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनमा सकारात्मक नतिजा हासिल गरेपनि ढल बग्न नरोकिएकोले चिन्ता बढेको छ । सफाइका कामले हप्ता वा वर्षमात्र बिताउनुभन्दा ठोस परिणाममुखी बनाउन सबैमा आग्रह गर्दछु । सफाइमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितीनै राज्यको उपस्थित हो भन्ने सोच्नु हुदैन । राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार संस्था तथा व्यक्तिको रचनात्मक सल्लाहसहित सक्रियता बढोस भन्न चाहन्छु ।
धिरेन्द्र शाहः "अब फोहोर उठाउनेभन्दा फोहोर नफाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।"
बाग्मती सफाइ अभियान सफा मन तथा उर्जाशिल तन भएका नागरिकको संयुक्त प्रयास र पहलकदमी हो । अहिलेसम्म निस्वार्थ रुपमा बाग्मती नदी , सहायक नदी तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानको सफाइ अभियानमा संचालन भएका छन् । अभियानले निरन्तरता मात्र पाउनु मात्र उपलब्धी होईन् । हिजोका दिनमा नदीको सफाइ तथा पानीको गुणस्तर क्रमिक रुपमा सुधार हुन सक्यो कि सकेन त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हामी सबै अभियन्ताले गरेको कामको स्मरण अको पूस्तौ पूस्ताले गर्नलायक बनाउनुपर्छ । सफाइ अभियानलाई दिन तथा बारमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा आवश्यकता तथा नागरिकको उपलब्धताका आधारमै देशैभर संख्यात्मक तथा गुणात्मक अभियान संचालन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
मदन पोखरेलः "कोरोनाको क्रासमापनि अभियान संचालन हुनु सुखद हो ।"
पछिल्लोे ३ महिना विश्वनै कोरोनाको माहामारीबाट प्रताडित बनेको अवस्थामा सफाइ अभियानले निरन्तरता पाईरहेको छ । यो सबै नागरिकको मन, जचन कर्मले तथा शुभेच्छाले हामी यहाँसम्म आईपुगेका छौँ । सफाइमा सहभागी हुने सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । नदी सफाइ अभियान संस्थागत बन्न सबैले गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा तालुक मन्त्रालयले बाग्मती नदीमा नुहाउन सक्ने बनाउने रणनीतिमा गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । सबै मिलेर फेरि नयाँ उचाइको अभियान संचालन गर्नुपर्ने भएकाले सहभागिताका लागि आग्रह गर्दछु ।
आशा पाण्डेः "डम्पिङ्ग साईटबाट बल्ल नदीमा परिणत भयो । "
बाग्मती नदी सफाइ अभियान ८ औँ वर्षमा पुग्दा सबैलाई खुसी लागेको छ । हिजको दिनमा डम्पिङ्ग साईटजस्तो देखिने, पुलबाट फोहर फाल्नेको लर्को लाग्थ्यो आज त्यस्ता काम बन्द भएका छन् । नदीले आफ्नै आकृति त पायो तर त्यसमा बहने पानीको शुद्धिकरणमा अब केन्द्रित हुनुपरेको छ । सफाइमा लाग्दै गर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै सहयोग र साथ पायौँ र यसको अझ व्यापकता र निरन्तरता रहोस् भन्न चाहन्छु ।
नारायण गिरीः "लाखौँ मानिसको ध्यान बन्यो बाग्मती ।"
नदी सफाइ अभियानले आशिंक सफलता प्राप्त गरेको छ । धेरै नागरिकको ध्यान र हप्ताको केहि समय नदी तथा सार्वजनिक स्थल सफाइमा बित्नु आफैमा सकारात्मक कदम हो । आज मनोहरा, हनुमन्ते, रुद्रमती, गोदावरी, तीनकुने , चक्रपथ लगायत देशैभर अभियान संचालनमा आएका छन् । सफाइमा लाग्दा प्राप्त हुने आत्मसन्तुष्टि र अपनत्वको भावना अन्त मिल्छ जस्तो लाग्दैन । अझ आगामी पूस्ताका लागि सफा र स्वच्छ नदी हस्तान्तरण गर्न धेरै गर्नुपर्ने भएकाले सामुहिक काममा विश्वास गर्दै सफाइलाई तिव्रता दिऔँ ।
माला खरेलः "फोहोर नदीमा मिल्काउनुपर्छ भन्ने सोच हट्यो । "
बाग्मती नदी सफाइ अभियानले हासिल गरेको उचाई देख्दा सन्तोष लाग्छ । फोहोरका पोका नदीमै मिल्काउने त हो भन्ने सोचमा परिवर्तन आएको छ । सरकारी निकाय तथा यस अभियानमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने संघ संस्था तथा व्यक्तिमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । सामाजिक अभियान भएकैले विभिन्न चुनौतीका बाबजुतपनि सफलता मिलेको छ । फोहोर संकलन गर्ने तथा नदीमा फोहोर फाल्ने काम पूर्ण रुपमा बन्द गर्न नागरिकले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको छ । संचार माध्यमको सक्रियतालेपनि हामीलाई थप हौसला प्राप्त भएको छ ।
प्रिया लामिछानेः "मनको फोहोर निकाल्नै बाँकि छ ।"
बाग्मती नदी सफाइ अभियानको उपलब्धी मापन गर्ने प्रशस्त आधार तय भएका छन् । नदी छेउमा जादा दुर्गन्ध हटेको छ । फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापपनमा नागरिकको सहयोग प्राप्त नभउको होईन तर धेरैको मनमा रहेको फोहोर हटाउनु आवश्यक छ । ठोस फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आएपनि तरल फोहोर व्यवस्थापनका लागि नागरिक तथा स्थानीय सरकार संचालन गर्ने व्यक्तिको मनमा रहेको फोहोर हटाउन सकेका छैनौँ । आउनुहोस् सबै मिलि यसमा हातेमालो गरौँ ।
चक्र बहादुर चन्दः "स्थानीय सरकार निदाउन हुँदैन ।"
बाग्मती नदीमा ठोस फोहोर उठाृउनु मात्र उपलब्धी होईन् । नदीमा मिसिएको डल तथा समय समयमा जथाभावी बालुवा निकाल्ने काम बन्ड गरिनुपर्छ । सरकारी निकाय तथा अन्य संघ स.स्थाले बनाएका नीति तथा योजना फेरि एक पटक पढ्न आग्रह गर्दछु । हाम्रोमा बनेका योजना कार्यन्वयन हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । अर्को कुरा राज्यका जिम्मेवार निकायको औपचारिक उपस्थिती मात्र अभियन्ताले खोजका होईनन् । सरकार तथा निजी क्षेत्र एवं अभियन्ताको संयुक्त पहल आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ जोड दिन सबैमा आग्रह गदर््छु । स्गानीय सरकारले आ आफ्ना वडामा विशेष अभियान चलाउदै त्यसको प्रचारभन्दापनि प्रभावकारितामा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु ।
ईश्वर पूडासैनीः "बाग्मती नदीको सफाइका मुद्दामा परियोजना लक्षित काम बन्द गरौँ । "
बाग्मती नदीको स्वरुप परिवर्तन गर्न सबैको सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ । नदीका नाममा परियोजना संचालन हुने , विभिन्न संघ संस्थाको मौसमी मुद्दा बन्नु हुदैन । सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाले आ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । अब सबैको ध्यान ढल व्यवस्थापनमा जानुपर्दछ । अभियान वा संलग्न अभियन्ताको संख्यात्मक उपस्थिती भन्दा परिणाममुखी बनाउन गृहकार्य गरौँ ।
दिलिप थापाः "हामी क्रमिक रुपमा सचेत बन्दैछौँ । "
धेरै मानिसको व्यक्तिवादी सोेचलाई सामाजिक बनाउन नदी सफाइ अभियानले सहयोग गरेको छ । अभियानले सार्थकता र महत्व बढेको छ । आज देशैभर अभियन्ताहरु क्रियाशिल रहेका छन् । सात वर्ष सम्म निरन्तर नथाक्ने अभियानले सबैलाई हौसला प्राप्त गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण भएसगैँ फेरि सफाइले उचाई लिनेमा विश्वस्त छु ।
ईकोसमाचार अन्य सक्रिय अभियन्ताको विचारलाई निरन्तर समावेश गर्दै बाग्मती सफाइ अभियानमा सक्रिय रहने व्यहोरा जनकारी गराउदछौँ ।
महिनावारी स्वच्छता तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा वेबिनार संचालन हुने
मानिसले तरकारी पाएनन्, तरकारीले खाने मानिस पाएन
लकडाउनको समयमापनि गढीमाई नगरपालिकामा वृक्षरोपण जारी
सागले बजार पाएन
Nagarjun-7, Kathmandu / Contact Office: Shankhamul, Kathmandu
9841-938989 / 9828 086685 DoI: Regd. No. 1000 075/076